Ụbọchị Ndị Ogbenye Ụwa
Onye ọ bụla n'ime anyị dịkarịa ala otu ugboro ná ndụ nyere ndị nọ ná mkpa aka. N'agbanyegh i ihe siri ike n 'ibi ndu, ebe a na - enwekwa ohere maka obere ihe a. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ụbọchị International nke Enyemaka Onyinye Enyemaka nyere ya ohere ezumike, n'ụzọ dị iche iche nke na-ekwu na ndị nwere obi dị mma agaghị agafe.
Ọgọst 19 - Ụbọchị Enyemaka Enyemaka
O yikarịrị ka onye anyị amaghị ụbọchị a, n'ihi na ha na-eme ememe ya kemgbe afọ 2008. Otú ọ dị, n'ihi mba ndị dị ike na ndị mepere anya, ụbọchị enyemaka enyemaka, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ezumike n'echiche ọdịnala, mgbe ahụ, ụbọchị dị mkpa bụ eziokwu.
Dịka iwu, taa, ụdị ọrụ ebere ọ bụla ma ọ bụ ịzụ ahịa na-eme ụdị ọrụ ọ bụla nke ndị ọrụ afọ ofufo, na-agbalị ịnweta ọtụtụ mmadụ dị ka o kwere mee. Ọbụna ma ọ bụrụ na mmadụ enwebeghị ike inyere ndị nọ ná mkpa aka ruo taa, o nwere ike ịchọrọ itinye aka. A na-ejikarị ọtụtụ ihe nkiri eme ihe na-akwado Day Day of Assistance. Na-egosiputa na ọtụtụ ndị mmadụ na-achọsi ike ịzụta ihe dị mma ma ọ bụ ọla mma dị mma karịa naanị itinye ego n'ime igbe ma ọ bụ mee ka nsụgharị.
Ụbọchị enyemaka enyemaka enyere mmadụ aka na-enweghị ekele na ndị na-aghọ nzọpụta na olileanya maka ndị mmadụ. Site n'ụzọ, mgbe niile, a họrọghị ụbọchị nke August 19 site na ohere. O mere na ememe ndị dị otú ahụ na-eme oge iji mee ihe ndị dị mkpa, ọ bụghị mgbe nile na-enye ọṅụ. Ọ bụ n'ụbọchị a n'afọ 2003 na ụfọdụ n'ime ndị ọrụ òtù UN nwụrụ, na-azọpụta ndị mmadụ mgbe mgbawa ahụ dị na họtel ahụ.
Taa, na Day Aid Aid International, ndị na-eme mgbalị na-anwa ime ka ọtụtụ ndị dị ka o kwere mee, kwuo banyere ọrụ ha ma chọọ ụzọ isi nyere ndị chọrọ ya aka. O doro anya na, a gaghị eme Ememe Enyemaka Ndị Agbata Ụwa na-adịghị eme ememe n'ebe dịpụrụ adịpụ nke mba anyị. Ma ọbụlagodi na ọkwa nke a na-emeghe na ụlọ akwụkwọ, nke a bụrịrị ntakịrị nzọụkwụ maka àgwà ọhụrụ nke ọgbọ na-eto eto na nke a.
Kedu otu esi eme ememe ụbọchị Valentine?
Ụbọchị Ụta Ụwa
Kedu ihe tulips odo na-enye?
Kedu ihe ị ga-enye enyi gị ruo afọ 35?
Ụbọchị ọmụmụ na ụdị ịke
Onyinye nye nwa m nwoke iri na anọ
Ememe na October
Ụbọchị International nke Dance
Ụbọchị ọmụmụ na ụdị nke Minnie Mouse
Esi nye onyinye?
Ero ihendori si mịrị amị
Azụ nke nhazi
Erysipelas nke ihu
Akwụkwọ mkpokọta akwụkwọ mpịakọta
Paịlọn maka ọnwụ
Gymnastics nke Tibet maka ụkọ ọnwụ
Ciabatta - uzommeputa
Nwa ahụ nwere ezigbo ezé
Ntụziaka nke Adam na - esi nri na esi enweta ọgwụgwọ
Nri na poteto n'ime ite na oven
Ọtụtụ mgbe akpịrị akpịrị
Ịgba ọgwụ mgbochi maka rabbits - ihe kachasị mkpa banyere inanctions
Anụ ụkwụ akpụ ụkwụ na osisi
Akpa na-amalite n'oge ime ime tutu amu nwa